Fitaovana fanamboarana birao. Fanamboarana fidirana, Excel, Outlook, PowerPoint & Word Files.
DataNumen Office Repair dia ny tsara indrindra Kitapo fanarenana Microsoft Office eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia misy fitaovana fanarenana ho an'ny tahiry Access MDB & ACCDB tahiry, takelaka Excel XLS & XLSX, fisie Outlook PST, PowerPoint Fampisehoana PPTX, ary antontan-taratasy Word DOC & DOCX.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,610)
Nahoana DataNumen Office Repair?
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Office Repair v5.5
Fanohanana amin'ny fanamboarana ny Microsoft Access 95 ka hatramin'ny 2019 ary ny fidirana amin'ny tahiry Office 365.
Tohana hanamboarana ireo rakitra Microsoft Excel xlsx sy xlsx amin'ny endrika Excel 3.0 hatramin'ny 2019 ary ny Excel ho an'ny endrika Office 365.
Fanohanana amin'ny fanamboarana ny rakitra Microsoft Outlook 97 ka hatramin'ny 2019 ary ny tahiry data an'ny Office 365 PST.
Tohana hanamboarana an'i Microsoft PowerPoint 2007 hatramin'ny 2019 ary PowerPoint ho an'ny fisie Office 365 pptx.
Fanohanana amin'ny fanamboarana ny Microsoft Word 6.0 ka hatramin'ny 2019 ary ny rakitra Word for Office 365.
Fanohanana amin'ny fanamboarana rakitra amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Tohano hanamboarana antontan-taratasy maloto.
Tohano ny fampidirana am-baravarankely amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra rakitra iray miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer mora foana.
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 5.5 Mey 3 ny 2021
DataNumen Office Repair 5.2 dia navoaka tamin'ny 25 Desambra 2020
DataNumen Office Repair 5.0 dia navoaka tamin'ny 3 Novambra 2020
fanavaozana DataNumen Access Repair mankany amin'ny andiany 3.1
fanavaozana DataNumen Excel Repair mankany amin'ny andiany 2.9
fanavaozana DataNumen PowerPoint Recovery mankany amin'ny andiany 1.2
fanavaozana DataNumen Word Repair mankany amin'ny andiany 3.5
fanavaozana DataNumen Outlook Repair mankany amin'ny andiany 7.6
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 4.9 Aogositra 20 ny 2020
fanavaozana DataNumen Outlook Repair amin'ny version 7.5.
DataNumen Office Repair 4.8 dia navoaka tamin'ny 22 Jona 2020
fanavaozana DataNumen Access Repair amin'ny version 3.0.
fanavaozana DataNumen Outlook Repair amin'ny version 7.2.
DataNumen Office Repair 4.6 dia navoaka tamin'ny 8 Febroary 2020
fanavaozana DataNumen Outlook Repair amin'ny version 7.1.
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 4.5 Novambra 25 ny 2019
fanavaozana DataNumen Access Repair amin'ny version 2.9.
fanavaozana DataNumen Excel Repair amin'ny version 2.8.
fanavaozana DataNumen PowerPoint Recovery amin'ny version 1.1.
fanavaozana DataNumen Word Repair amin'ny version 3.4.
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 4.1 Aogositra 12 ny 2019
fanavaozana DataNumen Access Repair mankany amin'ny andiany 2.8
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 4.0 Jolay 15 ny 2019
fanavaozana DataNumen Outlook Repair mankany amin'ny andiany 6.8
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 3.9 aprily 25 ny 2019
fanavaozana DataNumen Access Repair amin'ny version 2.7.
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 3.8 aprily 2 ny 2019
fanavaozana DataNumen Outlook Repair amin'ny version 6.6.
fanavaozana DataNumen Word Repair amin'ny version 3.2.
DataNumen Office Repair 3.6 dia navoaka tamin'ny 21 Janoary 2019
fanavaozana DataNumen Access Repair mankany amin'ny andiany 2.6
fanavaozana DataNumen Excel Repair mankany amin'ny andiany 2.4
fanavaozana DataNumen Outlook Repair mankany amin'ny andiany 6.5
Soloy DataNumen Outlook Express Repair amin'ny DataNumen PowerPoint Recovery
fanavaozana DataNumen Word Repair mankany amin'ny andiany 3.1
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 3.3 Novambra 22 ny 2018
fanavaozana DataNumen Outlook Repair amin'ny version 6.0.
fanavaozana DataNumen Word Repair amin'ny version 3.0.
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 3.2 septambra 9 ny 2018
fanavaozana DataNumen Excel Repair mankany amin'ny andiany 2.3
fanavaozana DataNumen Word Repair mankany amin'ny andiany 2.9
DataNumen Office Repair Navoaka tamin'ny 3.0 Jolay 23 ny 2018
fanavaozana DataNumen Word Repair mankany amin'ny andiany 2.8
fanavaozana DataNumen Outlook Repair mankany amin'ny andiany 5.6
DataNumen Office Repair 2.8 dia navoaka tamin'ny 11 Mey 2018
fanavaozana DataNumen Access Repair mankany amin'ny andiany 2.3
fanavaozana DataNumen Word Repair mankany amin'ny andiany 2.7
fanavaozana DataNumen Outlook Repair mankany amin'ny andiany 5.5
DataNumen Office Repair 2.6 dia navoaka tamin'ny 29 Mey 2016
fanavaozana DataNumen Excel Repair mankany amin'ny andiany 2.2
fanavaozana DataNumen Outlook Repair mankany amin'ny andiany 5.4
DataNumen Office Repair 2.5 dia navoaka tamin'ny 21 Aogositra 2015
fanavaozana DataNumen Word Repair mankany amin'ny andiany 2.5
fanavaozana DataNumen Outlook Repair mankany amin'ny andiany 5.3
DataNumen Office Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 5 Oktobra 2013
fanavaozana DataNumen Access Repair amin'ny version 2.2.
fanavaozana DataNumen Excel Repair amin'ny version 2.1.
fanavaozana DataNumen Word Repair amin'ny version 2.1.
fanavaozana DataNumen Outlook Express Repair amin'ny version 2.2.
DataNumen Office Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 2 Jolay 2013
fanavaozana Advanced Word Repair amin'ny version 2.0.
fanavaozana Advanced Excel Repair amin'ny version 2.0.
DataNumen Office Repair 1.5 dia navoaka tamin'ny 2 Jolay 2009
fanavaozana DataNumen Access Repair mankany amin'ny andiany 2.1
fanavaozana DataNumen Outlook Repair mankany amin'ny andiany 2.1
fanavaozana DataNumen Outlook Express Repair mankany amin'ny andiany 2.0
DataNumen Office Repair 1.0 dia navoaka tamin'ny 19 Febroary 2006
Kitapo fanarenana data Microsoft Office voarindra. Izy io dia misy fitaovana fanarenana ho an'ny tahiry MS Access simba na simba, takelaka MS Excel, antontan-taratasy MS Word, rakitra rakitra MS Outlook, ary MS Outlook Express fisie dbx sy mbx.
Amboary sy avereno ny Microsoft maloto PowerPoint .pptx fisie.